महरा काण्डमा प्रहरी लाचार, फरेन्सिक भ्यालुका महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नै चाहेन Canada Nepal
च्याम्पियन्स लिग : हालान्ड चम्किँदा डर्टमण्डको जित
महरा काण्डमा प्रहरी लाचार, फरेन्सिक भ्यालुका महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नै चाहेन
आश्विन १४ २०७६
यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रहरी समेत लाचार देखियो । भोलिपल्टसम्म उसको बयान ’मौखिक जानकारी पाएको’ भन्नेजस्तो उदेकलाग्दो थियो । घटनाका निर्णायक प्रमाण हुन सक्ने चश्मा, जुत्ताको सोल जस्ता फरेन्सिक भ्यालुका महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू समेत उसले सङ्कलन गर्न चाहेन । सत्ता र शक्तिमा हुनेले ती प्रमाण सजिलै मेटाउन सक्ने डर हुन्छ । भीआईपी केसमा पीडि़तको सुरक्षा ठूलो प्रश्न हो । केही मिनेटभित्रै अनुसन्धान सुरु गरेर आरोपितले घटना र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिएमा ’पीडि़त’लाई सुरक्षा दिने र आवश्यक देखिएमा आरोपितलाई हिरासतमा लिनेसम्मको काम गर्नुपर्ने थियो । तर प्रहरी रहस्यपूर्ण रूपले सुस्त देखियो । कुनै बेला यही प्रहरीले रवि लामिछानेलाई पहिले पक्रेर पछिमात्रै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
पीडि़तले महिला सांसदहरूलाई आइतबार राति नै फोन गरेर हारगुहार मागेको देखियो । तिनले पनि सोमबारसम्म अनौठो मौनता साधेर बसे । कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले जबापÞmमा “प्रमाण के छ ?“ भनेर उल्टै सोधेको देखियो । पीडि़तले प्रमाण देखाउन नसकेपछि उनी चुप लागिछन् । यौनहिंसाजस्तो विषयमा घटना थाहा पाएपछि पनि प्रमाण मागेर चुप बस्नुले उनी सांसद पदका लागि योग्य छैनन् भन्ने देखाउँछ । यो अन्य सांसदमा पनि लागू हुन्छ ।
अझ मूलधारका र स्वतन्त्र एवं निर्भीक भनिएका मिडियाहरूको रोल त सन्देहास्पद रह्यो । मूलधारमा बिरलै देखिने एउटा मिडियाले हिम्मत नजुटाएको भए र अन्य मिडियाजस्तै आफ्नो ’स्वार्थ’को बचाउमा लागेको भए यो घटना रफादफा हुने रहेछ । संसद सचिबालयकै कर्मचारी भएकाले प्रहरी, सांसद र मिडियासम्म हारगुहार गर्न सक्ने अवस्थामा पीडि़त रहिछन् । धेरै घटनामा पीडि़तसँग यस्तो सुविधा हुँदैन । तिनको अवस्था केकस्तो हुँदो हो ! जति खराबी र कमजोरी भए पनि नेपालजस्ता सिस्टम कमजोर भएका देशमा नागरिकको सच्चा साथी भनेको मिडिया नै हो ।
अधिकांश नेकपा शुभेच्छुकहरूले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन र पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने राय राख्नुभो । यो सकारात्मक भविष्यको सङ्केत हो । अपराधको बचाउले सिङ्गो पार्टीलाई अपराधीकरण गर्छ । आशा गरौँ, अनुसन्धानमा पार्टीले कुनै दबाब दिने छैन र यो केसको यथाशीघ्र न्यायिक निरूपण हुनेछ । त्यतिन्जेल कसैको नाम तोकेर ’बलात्कारी’ भन्ने अर्को अपराध हामीले पनि नगरौं !
(गाउँले एनआरएन युकेका सचिव हुन् । याे उनकाे निजी विचार हाे । उनकाे फे‍सबुकबाट साभार गरिएकाे हाे ।)
आश्विन १४, २०७६ मंगलवार १५:०३:०० बजे : प्रकाशित